နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: > ရီစရာလေးများရဲ့စုစည်းတဲ့နေရာလေးပါ8
Reply by aungkyawoo1982 on October 28, 2009 at 8:45pm
မြန်မာကားများကြည့်ပြီး ရရှိလာသော ဗဟုသုတ ၁၀၀............... မန်မာကားများကြည့်ပြီး ရရှိလာသော ဗဟုသုတ ၁၀၀ ဒီပို.စ် ကို ကိုယ်တိုင်ရေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အီးမေးကနေရလို. မဖတ်ရသေးတဲ့ သူတွေ ဖတ်စေချင်တာရယ်။ ကိုယ်တိုင်က လဲ ဝေဖန်၊ လေကန် ရမှ စားဝင်အိပ်ပျော်တာမို. ထို အချက် ၁၀၀ ထဲမှာ မပါသေးတဲ့ အများကြီးကျန်သေးတာ ကို ဆက်ရေးချင်သေးတယ်။ ၁၀၁၊ ၁၀၂ ...... စသဖြင့်ပေါ့။ ကဲ အခု ၁ ကနေ ၁၀၀ ထိ ဆုံးအောင် ဖတ်လိုက်ကြဦးနော်။ ပြီးရင် မပါသေးတဲ့ အချက် ကို ရေးပေးကြပါဦး။ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ၁။ မြန်မာလူမျိုးများသည် ခဏခဏ အတိတ်ကို ပြန်သတိရလေ့ရှိသူများဖြစ်ကြပြီး များသောအားဖြင့် အတိတ်ကို အဖြူအမည်းဖြင့်သာ သတိရလေ့ရှိသည်။ ၂။ သီချင်းနားထောင်လေ့ရှိသူများဖြစ်ပြီး သီချင်းနားထောင်နေရင်း အတိတ်အကြောင်းများ ပြန်တွေးလေ့ရှိသူများဖြစ်ကြသည်။ ၃။ စားသောက်ဆိုင်တွင် စကားစမြည်ပြောမည်ဆိုပါက .. အစာလုံးဝမစားရ။ (သိပ်စားချင်လျှင် အရည်တခုခု သို့မဟုတ် အနည်းငယ်မျှ စားခွင့်ရှိသည်။ ) ၄။ မိန်းကလေးများ ကားပျက်လျှင် အနီးအနားတွင် ကူညီပေးချင်သော ယောက်ျားလေးများ အများအပြားရှိသည်။ ၅။ ထိုယောက်ျားလေးများအားလုံးသည် ကားပြင်တတ်သူများသာဖြစ်ကြသည်။ ၆။ ထိုမိန်းကလေးသည် Handphone ရှိသော်လည်း များသောအားဖြင့် လမ်းသွားလမ်းလာများကိုသာ အကူအညီတောင်းလေ့ရှိသည်။ ၇။ Professional Graphic Designer တစ်ယောက်သည် Laptop ဖြင့် Touch pad ကို သုံးပြီး အံသြလောက်ဖွယ်ကောင်းသော ဒီဇိုင်းများကို Microsoft paint ဖြင့် ဖန်တီးလေ့ရှိသည်။ ၈။ Instant Messenger / Chat Client ဆိုသည်မှာ Pagemaker / MS Word ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ၉။ ကွန်ပျူတာပညာရှင်များသည် စာရွက်များဖြင့်သာ အလုပ်ရှုပ်နေတတ်ကြပြီး ကွန်ပျူတာသုံးလေ့မရှိကြ။ ၁၀။ သူခိုးများသည် အသံမကြားအောင် ခြေဖျားထောက်ပြီး လမ်းလျောက်လေ့ရှိသည်။ ၁၁။ ဆင်းရဲသားများ ရန်အလွန်ဖြစ်ကြသည်။ ၁၂။ ရုပ်ဆိုးသူများသည် လူဆိုး၊လူမိုက်များဖြစ်ကြသည်။ ၁၃။ လူမိုက်များသည် ဘောင်းဘီသာဝတ်ကြပြီး ပုဆိုးဝတ်လေ့မရှိကြ။ ၁၄။ လူဆိုးခေါင်းဆောင်အများစုသည် ကုတ်အကျီ (သို့) Leather Jacket ၀တ်လေ့ရှိပြီး တခါတရံ ဦးထုပ်ဆောင်းတတ်ကြသည်။ ၁၅။ လူဆိုးများသည် ခြံကျယ်ကြီးများ၊ တိုက်ပျက်ကြီးများတွင် စခန်းချလေ့ရှိသည်။ ၁၆။ ထောင်မှထွက်လာသူများသည် ကောင်းမွန်စွာလုပ်ကိုင်စားလေ့မရှိဘဲ လူဆိုး များဖြင့်သာ ပြန်လည်ပေါင်းသင်းပြီး ဆက်လက်ဆိုးသွမ်းကြသည်။ ၁၇။ Snooker ကစားသူ အများစုသည် အကျင့်ပျက် လူပွေများသာဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ၁၈။ မြန်မာလူမျိုးများသည် ရေကူးကန်နားသို့ရောက်လျှင် မည်သူ့ကိုမဆို ရေထဲသို့တွန်းချလေ့ရှိသည်။ ၁၉။ စီးပွါးရေးသမားအများစုသည် အနောက်တိုင်းဝတ်စုံကို ၀တ်စုံပြည့်ဝတ်ဆင်သွားလာလေ့ရှိသည်။ ၂၀။ ထိုလူအများစုသည် အနက်ရောင် လက်ဆွဲသေတ္တာများကိုင်ဆောင် လေ့ရှိကြသည်။ ၂၁။ ဖန်ခွက်ကျကွဲလျှင် ထိုသူနှင့်ပါတ်သက်သူ တစုံတယောက်မှာ သေဘေး(သို့)အန္တရာယ်နှင့် ကြုံနေရသည်မှာ အသေအချာပင်။ ၂၂။ သေခါနီးလူမမာများသည် စကားအလွန်များသောသူများဖြစ်ကြသည်။ ၂၃။ သူတို့စကားပြောလို့ မပြီးမချင်း သေလေ့မရှိ။ ၂၄။ ကျေးရွာတိုင်းတွင် ထန်းတောရှိတတ်ပြီး၊ အဆိုပါထန်းတောတွင် အချိန်ပြည့် မူးရူးနေသူများဖြင့် ပြည့်နေသော ထန်းရည်ဆိုင်ရှိသည်။ ၂၅။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘ၀သည် ကင်တင်းတွင် တနေကုန်ထိုင်ပြီး ရီစရာဟာသများပြောကာ ကောင်မလေးများကို ထိုင်ငမ်းနေသော နေ့ရက်များဖြစ်သည်။ ၂၆။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆိုသည်မှာ Myanmar Info Tech ( ICT Park ) နှင့် အင်းလျားကန်ဘောင်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၇။ စာသင်ခန်းထဲတွင် စိတ်ကြိုက်စကားပြောခွင့်ရှိသည်။ ၂၈။ ကျောင်းသူ မိန်းကလေးအများစုသည် အသံစွာကျယ်စွာကျယ် စကားပြောလေ့ရှိပြီး၊ ကင်တင်းတွင် ဟီးဟီးဟားဟား လုပ်လေ့ရှိသူများဖြစ်ကြသည်။ ၂၉။ ထိုမိန်းကလေးများသည် ဆိုင်ထဲသို့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်လာလျှင် ၀ိုင်းစတတ်ကြသည်။ ၃၀။ အစခံရသော ယောက်ျားလေးတိုင်း ရှက်ပြီး အမှားမှား အယွင်းယွင်းများလုပ်လေ့ရှိသည်။ ၃၁။ အသက်မည်မျှပင်ကြီးစေကာမူ အထက်တန်းကျောင်း တက်လေ့ရှိကြသည်။ ၃၂။ လူငယ် ယောက်ျားလေး မိန်းကလေးများသည် ၃ယောက် ၄ယောက် အဖွဲ့လိုက်သာ ပေါင်းသင်းလေ့ရှိကြသည်။ တယောက်တည်း နေလေ့သိပ်မရှိ။ ၃၃။ ယောက်ျားလေးအဖွဲ့မှ တယောက်ယောက်နှင့် မိန်းကလေးအဖွဲ့မှ တယောက်ယောက် ချစ်သူရည်းစားဖြစ်သွားလျှင် ယောက်ျားလေးများသည် ထိုမိန်းကလေးအဖွဲ့မှ အခြားသော မိန်းကလေးများနှင့် ရည်းစားဖြစ်သွားလေ့ရှိသည်။ ၃၄။ သမီးရည်းစားများသည် သီချင်းဖွင့်ထားသော ပန်းခြံထဲတွင် ပြေးလွှားနေကြလေ့ရှိသည်။ ၃၅။ မိန်းကလေးများ အော့အန်ပါက ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ၃၆။ ကိုယ်ဝန်ရှိသောမိန်းကလေး ချော်လဲလျှင် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျဖို့ ၉၀% သေချာသည်။ ၃၇။ မွေးလာသော ကလေးမှာ ယောက်ျားလေးဖြစ်လျှင် လင်ယောက်ျားမှာ အလွန်ပျော်ရွှင်လေ့ရှိသည်။ ၃၈။ မြန်မာမိန်းကလေးများသည် စိတ်ဆိုးလျှင် ပါးရိုက်လေ့ရှိကြသည်။ ၃၉။ အသည်းကွဲသူများသည် အလွမ်းသီချင်းများ နားထောင်ပြီး ငိုကြွေးလေ့ရှိကြသည်။ ၄၀။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့် ရန်ဖြစ်ပါက အဆိုပါမိန်းကလေးနှင့်ရည်းစားဖြစ်တတ်သည်။ ၄၁။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်သည် ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်အား မကျေနပ်၍ လက်စားခြေလိုလျှင် သမီးရည်းစားအဖြစ်တွဲလေ့ရှိသည်။ ၄၂။ အရက်မူးလာရင် အာလေး လျှာလေးဖြင့် စကားပြောတတ်ပြီး .. ပြောသမျှစကားအများစုမှာ ရန်စကားများသာဖြစ်ကြသည်။ ၄၃။ အရက်ဆိုင်အတွင်းရန်ဖြစ်လျှင် များသောအားဖြင့် ရဲလာဖမ်းလေ့မရှိ။ ၄၄။ မူးရူးပြီးအိမ်ပြန်လာလျှင် အိမ်ရှိကောင်မလေးများအား မတရားပြုကျင့်တတ်ကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် စားပွဲပေါ်မှ ပန်းအိုလဲသွားခြင်း၊ ကျကွဲခြင်း၊ ပန်းပွင့်ကြွေခြင်းများဖြစ်တတ်သည်။ ၄၅။ အခန်းတစ်ခန်းအတွင်းမှ ထွက်လာပြီး ပုဆိုးပြင်ဝတ်လျှင် မုဒိန်းကောင်ဖြစ်သည်။ (မူးနေသူဖြစ်ပြီး မျက်နှာတွင် အဆီပြန်နေပါက ၁၀၀% သေချာသည်။) ၄၆။ မတရားပြုကျင့်ခံရသူတိုင်း ကိုယ်ဝန်ရှိလာကြသည်။ ၄၇။ သူတို့သည် အများအားဖြင့် တရားစွဲလေ့မရှိကြ။ ၄၈။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချလေ့လဲမရှိသည့်အပြင် ကလေးကို တောရွာတခုခုသို့သွားပြီ ခက်ခဲဆင်းရဲစွာ မွေးလေ့ရှိသည်။ ၄၉။ အိမ်များတွင် ချောမောလှပသော အိမ်ဖေါ်ကောင်မလေးများရှိတတ်သည်။ ၅၀။ ထိုအိမ်ဖေါ်ကောင်မလေးများသည် အိမ်ရှင်၏ သားများနှင့် ငြိစွန်းသွားတတ်ကြသည်။ ၅၁။ ရုပ်ဆိုးသောအိမ်ဖေါ်အား မည်သူမျှ မတရားပြုကျင့်ခြင်းမရှိ။ ၅၂။ ခေတ်လူငယ်အများစုသည် Shopping Mall များ၊ Snack Shop များတွင် တချိန်လုံး အချိန်ဖြုန်းနေတတ်ကြသည်။ ၅၃။ အဆိုပါ ဆိုင်များတွင် တွေ့သမျှ ကောင်မလေးများအား မျက်စပစ်ပြခြင်း စသည် စသည်များ စိတ်ကြိုက်လုပ်ခွင့်ရှိသည်။ ၅၄။ မိန်းကလေးများ အဖွဲ့လိုက် ခရီးထွက်ပါက ယောက်ျားလေးအဖွဲ့တဖွဲ့နှင့် လမ်းခရီးမှာ ကြုံတွေ့လေ့ရှိပြီး ချစ်သူရည်းစားဖြစ်သွားလေ့ရှိသည်။ ၅၅။ ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးအဖွဲ့များတွင် အချောဆုံးတယောက်မှ လွဲပြီး ကျန်သော သူငယ်ချင်းများမှာ တချိန်လုံး ဟာသလုပ်ပြီး ရီစရာများပြောနေတတ်ကြသည်။ ၅၆။ ခေတ်လူငယ်အများစုမှာ မိဘ တစ်ဦး(သို့)နှစ်ဦးစလုံး မရှိတတ်ကြ။ ဦးလေး အဒေါ်များ သူငယ်ချင်းများဖြင့်သာနေလေ့ရှိကြသည်။ ၅၇။ စတိုးဆိုင်ရှိ အရောင်းစာရေးမများအား စိတ်ကြိုက် ရည်းစား စကားပြောခွင့်ရှိသည်။ ၅၈။ (အရောင်းတာဝန်ခံ/မန်နေဂျာ/Security) မည်သူကမျှ မတားဆီးကြ၊ အနှောင့်အယှက်မပေးလေ့မရှိကြ။ ၅၉။ မည်သူမဆို Taxi ငှားစီးလျှင် မည်သည့်အခါမှ ဈေးမဆစ်ကြ။ ၆၀။ အသက်၄၀ကျော် မိန်းမကြီး ၉၀% ခန့်မှာ အတင်းပြောတတ်သူများသာဖြစ်ကြသည်။ ၆၁။ ရှုပ်ပွေသော မိန်းမများသည် အချိန်ပြည့် ဖဲရိုက်နေလေ့ရှိသည်။ ၆၂။ အိမ်တစ်အိမ်တွင် အဖိုး၊အဖွားများသည် သြဇာအရှိဆုံးလူများ ဖြစ်ကြသည်။ ၆၃။ ညအချိန်မတော် လမ်းမပေါ်တွင် သီချင်းအကျယ်ကြီးဆိုပြီး ဂစ်တာတီးနေသူများကို တရပ်ကွက်လုံးက သည်းညည်းခံကြသည်။ ၆၄။ ဂစ်တာတလုံးထဲဖြင့် Drum/Keyboard အသံများထွက်အောင် တီးတတ်ကြသည်။ ၆၅။ ကောင်မလေးများသည် အဖေါ်မပါဘဲ ညအချိန်မတော် လူပြတ်သော လမ်းများတွင် သွားလာလေ့ရှိသည်။ ၆၆။ ထိုလမ်းများတွင် အဖေါ်မပါသော ကောင်မလေးအား ဆွဲလားရမ်းလားလုပ်ဖို့ အရက်မူးနေသော လူရမ်းကားများ လူဆိုးများ စောင့်နေတတ်သည်။ ၆၇။ ထိုမိန်းကလေးများသည် အများအားဖြင့် အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းလေ့မရှိကြ။ ၆၈။ ယောက်ျားလေးများသည် တစ်ယောက်တည်းပင်ဖြစ်စေကာမူ ၂ယောက်၃ယောက်မကသော လူဆိုး၊ လူမိုက်များနှင့် ရန်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ရန်ဖြစ်သည့်အခါများတွင် တိုက်ဆိုင်စွာ ဘောင်းဘီရှည်သာ ၀တ်ထားလေ့ရှိသည်။ ၆၉။ ရန်ဖြစ်သည့်အချိန်တွင် လဲကျသွားပါက ရှုံးပြီဖြစ်သည်။ ၇၀။ အလွန်ချောမောလှပသော ကောင်မလေးများတွင် ခပ်ပေါပေါခပ်ချာချာ အစ်ကိုတစ်ယောက် ရှိနေတတ်သည်။ ၇၁။ ထိုမိန်းကလေး၏ အဖေသည် သူ၏သားမက်လောင်းအား မည်သည့်အခါမျှ မျက်နှာကျောမတည့်။ ၇၂။ နယ်မှ တယောက်တည်းလာနေသော မိန်းကလေးများသည် သိန်းချီပေးရသော အခန်းများငှားနေတတ်ကြပြီး ဘတ်စ်ကားဖြင့် သွားလာလေ့ရှိသည်။ ၇၃။ ဆင်းရဲသား အလုပ်သမားများသည် စုတ်ချာသော (တခါတရံ) စုတ်ပြဲနေသော အ၀တ်အစားများသာ အမြဲလိုလိုဝတ်ဆင်ကြသည်။ ၇၄။ ချမ်းသာသူတို့၏ သားသမီးများသည် ဘွဲ့ရပြီးသည်အထိ အလုပ် လုပ်လေ့မရှိကြ။ ၇၅။ အသည်းကွဲသူများသည် မီးရထားလမ်းဘေးတွင် လမ်းလျောက်နေလေ့ရှိသည်။ ၇၆။ ပိုက်ဆံချမ်းသာသော လုပ်ငန်းရှင်သူဌေးများသည် ဆင်းရဲပြီးချောမောလှပသော ကောင်မလေးအား လက်ထပ်ခွင့်ရရန် ယောက်ခမလောင်းများအား ငွေဖြင့် သိမ်းသွင်းတတ်သည်။ ၇၇။ အဖြူရောင်ကုတ်အကျီရှည်ဝတ်ထားပြီး နားကျပ်လည်ပင်းတပ်ထားသူတိုင်း ဆရာဝန်များဖြစ်ကြသည်။ (သို့) ဆရာဝန်တိုင်း ဂျူတီကုတ်ဝတ်ပြီး နားကျပ်လည်ပင်းဆွဲထားတတ်ကြသည်။ ၇၈။ ခွဲစိတ်ကုသမှုမအောင်မြင်လျှင် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးသည် ခွဲခန်းအတွင်းမှ ခေါင်းယမ်း၍ (သို့) မျက်နှာပျက်၍ ထွက်လာတတ်သည်။ ၇၉။ မင်းသား(သို့) မင်းသမီး၏ အမေများတွင် နှလုံးရောဂါ (သို့) သွေးတိုးရောဂါများရှိတတ်သည်။ ၈၀။ တယ်လီဖုန်းမှ သတင်းဆိုးကြားရလျှင် တယ်လီဖုန်းပြောနေရင်းမှ မူးမေ့လဲသွားတတ်သည်။ ၈၁။ အလွန်တော်သောမိန်းမများသည် အသုံးမကျသော (သို့) အလွန်မာနကြီးသော ယောက်ျားများကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။ ၈၂။ အလွန်ထက်မြက်သော မိန်းမများ၏ အိမ်ထောင်ရေးသည် အဆင်မပြေ။ ၈၃။ လူငယ်များ၏ နာမည်အများစုမှာ ခေါ်ရခက်သော တောက်ညင်ကတ်ဖွယ်နာမည်များ ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ၈၄။ တခါတရံ မည်သို့မျှ တွေးတောယူဖွယ်မရလောက်သော နာမည်မျိုးရှိသည်။ ၈၅။ ထိုတောက်ညင်ကတ်ဖွယ်နာမည်ဆိုးကို မည်သူကမျှ စခြင်းနောက်ခြင်း ပြောင်လှောင်ခြင်းမပြုကြ။ ၈၆။ ယောက်ျားနောက် ခိုးရာလိုက်ပြေးသွားသော မိန်းကလေးများသည် မိဘများအား ခိုးရာလိုက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း .. လိုက်မရှာရန် နှင့် ခွင့်လွှတ်စေချင်ကြောင်း .. အစရှိသဖြင့် စာရေးထားတတ်ကြပြီး .. အိပ်ယာပေါ် သို့မဟုတ် အိပ်ယာဘေးက စားပွဲပေါ်တင်ထားလေ့ရှိကြသည်။ ၈၇။ ထိုစာအများစုတွင် သမီးမိုက် ဆိုသော စာသား ပါလေ့ရှိသည်။ ၈၈။ ယောက်ျားလေးအများစုကတော့ မိဘကို မိန်းမခိုးမည့်ကိစ္စနှင့်ပါတ်သက်ပြီး လုံးဝ အသိပေးလေ့မရှိ။ ၈၉။ နှဲသံကြားပါက (နာတာရှည်) မမာမကျန်းဖြစ်နေသူများ သေတတ်သည်။ ၉၀။ ယောက်ျားလေးများ၏အခန်းသည် လူမနေသည့်အခန်းကဲ့သို့ အစဉ်အမြဲရှင်းလင်းနေတတ်ပြီး သန့်ရှင်းနေလေ့ရှိသည်။ ၉၁။ အိမ်ဖေါ်မိန်းမများ၊ ခြံစောင့်များသည် အိမ်ရှင်၏ သမီးအား မမလေး ဟုသာ ခေါ်လေ့ရှိသည်။ ၉၂။ အခုနောက်ပိုင်းတွင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစကားများကိုပင် လေးနက်အောင် တမင်ကြိုးစား ဖျစ်ညှစ်ပြောတတ်သော အကျင့်များရှိလာကြသည်။ ၉၃။ လူကြားထဲတွင် အိနြေ္ဒပျက်လောက်အောင် တကိုယ်လုံးနှင့် လက်များရမ်းခါလှုပ်ပြီး စကားပြောတတ်သူများကို .. မထူးခြားသယောင် ဆက်ဆံပြောဆိုတတ်ကြသည်။ ၉၄။ လူငယ်များသည် ပူအိုက်သောရာသီမှာပင် အနွေးထည်များဝတ်ဆင်ကြလေ့ရှိသည်။ ၉၅။ ကျောင်းသားကျောင်းသူ အများစုမှာ စာကြိုးစားသည်ကို မတွေ့ရ။ ၉၆။ ဖယောင်းတိုင်များထွန်းထားလျှင် အလွန်ပင်ရိုမန်တစ်ဖြစ်သည်။ ၉၇။ သင်္ကြန်လည်ရာတွင် မည်သူမျှ အရက်မသောက်ကြ။ ၉၈။ နိုင်ငံခြားသွားပြီး ပညာသင်လာပါက မြန်မာပြည်တွင် အလွန်အောင်မြင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် (သို့) ပညာရှင်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်သည်။ ၉၉။ ယောက်ျားဖြစ်ပြီး နှုတ်ခမ်းမွှေးမရှိရင် အတုတပ်ထားတတ်ကြတယ်။ ၁၀၀။ မြန်မာလူမျိုးများသည် မည်မျှပင် ဒေါသထွက်စေကာမူ ဆဲဆိုခြင်းမပြုကြ။ ကဲ မပါသေးတဲ့ အချက်တွေ ကွန်.မန်. မှာ နံပါတ်စဉ်တပ် ရေးခဲ့ပါဦး။ မရေးခင် သူများရေးထားတာ အရင်ဖတ်ဦးလေ။ တော်ကြာ တူတာတွေ ထပ်ကုန်မယ်နော်။ မြန်မာရုပ်ရှင်လောက ကြီး တိုးတက်ပါစေ။ -==========================================================================
Permalink Reply by aungkyawoo1982 on November 26, 2009 at 10:48am
ရယ်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ရိုက် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးမရမီ နယ်ချဲ့ တို့ အုပ်စိုးချိန်ကဖြစ်ပါသည်။ မေမြို့ (ယခုပြင်ဦးလွင်) သို့ သွားသော မီးရထားလမ်းပေါ်တွင် မြန်မာအမျိုးသမီး တစ်ဦး၊ မျက်နှာဖြူ တစ်ဦးနှင့် မြန်မာအမျိုးသား တစ်ဥိးတို့လိုက်ပါလာကြသည်။ မီးရထားသည် ထုံးဖိုဘူတာမှ လွန်ပြီး မကြာမီမှာပင် လွန်းထိုးတက်ရသည့်နေရာသို့ ရောက်လာသည်။ လွန်းထိုးရသောနေရာသို့ ရောက်သောအခါ မီးရထားသည် လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းသို့ ဖြတ်ဝင်သွားရသည်။တွဲထဲတွင် မှောင်သွားသည်။ ထိုအချိန်မှာပင် " ပြွတ်" ခနဲ အသံကြားလိုက်ရပြီး အသံနှင့်မရှေးမနှောင်းမှာပင် " ဖြန်း" ခနဲအသံကိုပါ တွဲထဲရှိလူများ ကြားလိုက်ကြရသည်။မီးရထားလည်း လိုဏ်ခေါင်း ထဲမှ ထွက်ကာ အလင်းထဲပြန်ရောက်သွားသည်။ တွဲထဲမှလူများသည် အမျိုးသမီးငယ်ထိုင်နေသည့် နေရာသို့ လှမ်းပြီး အကဲခတ်နေကြသည်။ မျက်နှာဖြူမှာ ပါးတစ်ဖက်နီရဲနေပြီး သူ့ ဟာသူ လက်ဖ၀ါးဖြင့်ပွတ်နေသည်။ တွဲထဲမှလူများ ကလည်းမီးရထား လိုဏ်ခေါင်း ထဲဖြတ်စဉ် မှောင်သွားသည့်အချိန်မှာ မျက်နှာဖြူ သည် မြန်မာအမျိုး သမီးအားနမ်းသောကြောင့် အမျိုးသမီးကပါးရိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်မည်ဟု တွေးကြည့်နေကြသည်။ ထိုအချိန်မှာပင်မျက်နှာဖြူကလည်း မြန်မာကောင်လေးသည် မီးရထားလိုဏ်ခေါင်းအတွင်းထဲဖြတ်နေစဉ် ကောင်မလေးအား နမ်းခိုက်ခြင်းဖြစ်မည်။ ထိုသို့ နမ်းခြင်းအတွက် မြန်မာကောင်မလေးက ပါးရိုက်ရာတွင် လူမှားကာ သူ့ ကိုရိုက်မိခြင်းဖြစ်ရမည် ဟုတွေးနေလေသည်။ မြန်မာအမျိုး သမီးငယ်သည် တွဲထဲမှ လူများကို တစ်ချက်အကဲခတ်ပြိး သူ့ ရှေ့ မှာထိုင်နေသည့် မျက်နှာဖြူနဲ့ ဘေးရှိမြန်မာကောင်လေးကိုကြည့်ကာ မရယ်မိအောင်မနည်းထိန်းထားရလေသည်။ သူသည်တွဲအပြင်သို့ ကြည့်ရင်းတွေးနေသည်။ မျက်နှာဖြူသည် မီးရထား လိုဏ်ထဲသို့ ဖြတ်သောအချိန်တွင် လူမှားကာ မြန်မာကောင်လေးကိုသွားနမ်းဟန်တူသည်။ ထို့ ကြောင့်မြန်မာကောင်လေးက ပါးရိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ရမည် ဟု တွေးနေသည်။ မြန်မာကောင်လေးမှာမူ မည်သူ့ ကိုမှမကြည့်ပဲ အပြင်သို့ ငေးကြည့်နေသည်။ သူကလည်း သူ့ အတွေးနှင့်သူ ကျေနပ်နေသည်။ မီးရထား လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းသို့ ဖြစ်နေချိန်တွင် သူ့ ၏လက်ကို သူ "ပြွတ်" ခနဲ စုပ်ပြိး သူ့ ရှေ့ မှ မျက်နှာဖြူ၏ပါးကို အားရပါးရပိတ်တီးလိုက်ရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသတည်း
Permalink Reply by wai yan oo on December 24, 2009 at 11:10pm
မှန်သလားလို့ပါ သားငယ်သည် အမေဖြစ်သူအား ရှေ့ကကြည့်လိုက် နောက်ကကြည့်လိုက် ဘေးတိုက်ကြည့်လိုက်နှင့်အပြန်ပြန် အလှန်လှန် ကြည့်သည်။ကြာသော် အမေဖြစ်သူ စိတ်မရှည်တော့သည်နှင့်ဒေါသသံဖြင့်ပြောသည်။ ``ဟဲ့ ကောင်လေး ဘာဖြစ်လို့ ငါ့ကို ဒီလောက်ကြည့်နေတာလဲ။´´ ``ဖေဖေ ပြောတာမှန် မ မှန်သိချင်လို့ပါ။မေမေ၊ဖေဖေက အိမ်က အစေခံ မကျော့ကိုပြောတယ်၊ `ငါတို့ နှစ်ယောက် နေတာထိုင်တာ သတိထားရမယ်၊ငါ့မိန်းမရဲ့ နောက်စေ့မှာလည်းမျက်စိပါတယ်`တဲ့ မြိုမကျဘူး စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဆေးရုံသို့ရောက်ရှိလာပြီး လူနာတစ်ယောက်ကိုမေးသည်။ ``ဘာရောဂါနဲ့တက်ရောက်ကုသနေတာလဲ ခင်ဗျာ။´´ ``လိပ်ခေါင်းရောဂါပါ။´´ ``အခု မိတ်ဆွေကို ဘယ်လို ကုသနေပါသလဲ။´´ ``စအိုထဲကို ပိုက်သွင်းပြီး ဆေးတွေ လောင်းချပါတယ်။´´ ``မကျေနပ်တာ ရှိလား။´´ ``မရှိပါဘူး၊အားလုံးကောင်းပါတယ်။´´ ဘေးကုတင်က လူနာကို စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက မေးပြန်သည်။ ``မိတ်ဆွေကကေရာ ဘာရောဂါနဲ့ ဆေးရုံတက် ကုသနေတာလဲ။´´ ``လည်ချောင်းနာတဲ့ရောဂါပါ။´´ ``အခု မိတ်ဆွေကို ဘယ်လို ကုသနေပါသလဲ။´´ ``အာခေါင်ထဲကို ပိုက်သွင်းပြီးဆေးတွေ လောင်းချပါတယ်။´´ ``မကျေနပ်တာ ရှိလား။´´ ``တစ်ခုပဲ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ပိုက်သွင်းကုတဲ့ ဥစ္စာ ကျွန်တော့ဆီက စစေချင်ပါတယ်။´´ ကိုက်မထားနဲ့လေ သွားကုခန်းတွင်ဖြစ်သည်။ အမေဖြစ်သူက ၎င်း၏သားငယ်ကိုပြောသည်။ ``သားက လိမ္မာပါတယ်နော်၊ပါးစပ်ကို ဟလိုက်ပါကွယ်။အန်ကယ်ဒေါက်တာကို သူ့လက်ညှိုးဆွဲထုတ်ခွင့် ပြုလိုက်ပါကွယ်။´´ မလိုတော့ဘူး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ အသိမိတ်ဆွေ ဖြစ်ပြီး ညတစ်ညလုံး အတူတူအချိန်ဖြုန်းလိုက်ကြသည်။ နောက်တစ်နေ့ မနက်တွင် အမျိုးသမီးက မေးသည်။ ``ရှင့်မှာ AIDS ရောဂါ ကင်းရှင်းကြောင်း ဆေးလက်မှတ်ရှိလား။´´ ``ရှိတယ် ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲ။´´ ``သြော်....လွှင့်ပစ်ချင်ရင် လွှင့်ပစ်လို့ ရတယ်လို့ ပြောမလို့ပါ။´´ ရဲဆေး လူနာသည် ကြောက်စိတ်ကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံးတုန်နေသည်။ဆရာဝန်ကလူနာကို အရက်အနည်းငယ် တိုက်လိုက်သည်။ထို့နောက် ဆရာဝန်ကမေးသည်။ ``ဘယ့်နှယ့်လဲ၊ရဲစိတ်ရဲမာန်တွေ ၀င်လာပြီမဟုတ်လားဗျ။´´ ``ဟုတ်တယ် အခု ကျုပ်သွားကို လာထိရဲတဲ့ ကောင် ထိကြည့်စမ်း၊အကြောင်းသိသွားစေရမယ်..ဟင်း´´ ထပ်ယူမယ် အမေဖြစ်သူကမေးသည်။ ``ကိတ်မုန့်ကို ဘယ်သူစားလိုက်သလဲ။´´ သမီးငယ်က ကြောက်လန့်တကြားဖြေသည်။ ``မသိဘူး မေမေ။´´ ``ထပ်စား ချင်သေးလား။´´ ``ဟုတ်ကဲ့။´´ အပေါင်းအသင်းကောင်းသူ ``သူ့မှာ ရန်သူလုံးဝ မရှိဘူး၊ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေထဲက သူ့ကိုကြည့်လို့ရတဲ့သူ တစ်ယေက် မှ မရှိဘူး။´´ သတင်းကောင်း လူရွှင်တော်မင်းသားတစ်ဦးသည် အချိန်အတန်ကြာ ရုပ်ရှင်ကား ရိုက်ရန် မည်သည့်ကုမ္ပဏီမှ မဖိတ်ခေါ်သဖြင့် စိတ်ဓာတ်ကျလျက်ရှိသည် တစ်နေ့ အိမ်သို့ ပြုံးပြုံး ရွှင်ရွှင်နှင့်ရောက်ရှိလာပြီး ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် ကားရိုက်ရန်စာချုပ် ချုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊မနက်ဇြန်တွင် နယ်ထွက်ရိုက်ရမည်ဇြစ်ကြောင်း ဇနီးဖြစ်သူအားပြောသည်။ ``သူတို့ စိတ်ပြောင်းခဲ့ရင် ဒီနေ့ ည ၁၂-နာရီ မတိုင်မီ ကြေးနန်းနဲ့အကြောင်းကြားမယ်ကွ။´´ ည ၁၂-နာရီ မတိုင်မီ ၅ မိနစ် အလိုတွင် ကြေးနန်းရုံးမှ ကြေးနန်းစာလာပို့သည်။ မင်းသားသည် မျက်နှာအပျက်ကြီး ပျက်ကာ ကြေးနန်းစာကို ဖွင့်မဖတ်ဝံ့အောင် ဖြစ်နေသည်။ မိန်းမကတိုက်တွန်းသည်။ ``ဖတ်မှာသာဖတ်စမ်းပါ၊ရှေ့မှာ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ ဘယ်သူပြောနိုင်တာမှတ်လို့။´´ လက်နှစ်ဘက် တုန်တုန် ယင်ယင်ဖြင့် ကြေးနန်းစာကိုမင်းသားဖွင့်သည်။တဖြည်းဖြည်းနှင့် ၎င်း၏မျက်နှာရွှေလမင်း လိုဝင်းလက်လာသည်။ ထို့နောက် ကုလားထိုင်မှ ထခုန်ကာ ၀မ်းသာအားရပြောသည်။ ``ဟေး ဟေး ဟေး၊ဟန်ကျလိုက်တာ၊စာချုပ်ကို သူတို့မဖျက်ဘူးဟေ့၊အခုကြေးနန်းက မင်းအမေသေကြောင်း အကြောင်းကြားတဲ့ ကြေးနန်းကွ ရော့ ဖတ်ကြည့်။´´ ရောက်ရင်တွေ့မယ် အရက်သမားတစ်ယောက် အငှားကားကို တက်စီးသည်။ကားဆရာကိုအာလေးလျှာလေးနဲ့ပြောသည်။ ``ကား--ဆရာ၊ကျုပ်ကို----တောင်ဥက္ကလာပ၈-ရပ်ကွက်ကို-------လိုက်ပို့စမ်းပါဗျာ။´´ ``အိမ်နံပါတ် ဘယ်လောက်လဲ။´´ ``ဟိုရောက်တော့---မင်းဟာမင်း---တွေ့---ပါလိမ့်မယ်ကွ။´´ ခက်ခဲတဲ့ ပုစ္ဆာ ကိုချူချာ ဘူမိဗေဒသမားကိုမေးသည်။ ``ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာ ငါးဘယ်နှစ်ကောင်ရှိတယ် ဆိုတာပြောနိုင်ရင်နှစ်ကောင် စလုံးကိုပေးမယ်။´´ ``နှစ်ကောင်။´´ ``ခင်ဗျား အကြားအမြင်ရတဲ့ လူထင်တယ်၊မှန်တယ်ဗျ ရော့...ယူ။´´ ယောကျာ်းတို့စေတနာ သားငါးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်မျိုးစုံ အပြည့်ပါသည့်ဈေးခြင်းကို အနိုင် နိုင်ဆွဲကြာ့ပန်ရောက်လာသည့် ဇနီးသည်ကိုကြည့်ကာ ယောကျာ်းဖြစ်သူကပြောသည်။ ``မင်း အသက်အရွယ်နဲ့ ဒီလိုအလေးအပင် ဆွဲနေတာကို ငါမကြည့်နိုင်ဘူးမိန်းမရေ၊ဒီနေ့က စပြီးရပ် လိုက်ဖို့လိုပြီ။´´ ``ရှင်က ဘယ်လို အကြံပေးချင် လို့လဲ။´´ ``ဈေးကို နှစ်ခေါက်သွား။´´
Posted by Hajee Than Hla Oo at 11:20 AM